Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Uhambo lokuzonwabisa lubhejo olukhuselekileyo kwi-Air France
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Air France ibhengeze ukongezwa ebusika kweenqwelo moya zehlobo kuphela ezivela eParis Charles de Gaulle ukuya eSeville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba naseKrakow.
Ukubheja kukhenketho lokuzonwabisa kunokunceda iAir France ukuba iphinde ikhawuleze.
I-Airline kufuneka ijolise kwiindlela zokuzonwabisa eziphezulu.
Abahambi banqwenela ukubaleka iindawo zabo zokutshixa.
Ukubheja kweAir France kwiindlela zokuzonwabisa kunokubangela ukubuyela ngokukhawuleza komphathi njengoko uhambo lokuphumla oluphumayo eFrance lonyuke laya kwi-74.3% ngo-2020, ngaphandle kwezithintelo ezinciphisa inani elipheleleyo lohambo oluphumayo.
Iingcali zeshishini ziqaphele ukuba, xa kufunwa ukhenketho lweemfuno zeshishini, inqwelomoya kufuneka ijolise ekusebenziseni iindlela zokuphumla ezinomthamo omkhulu kunye neekhabhathi zonyuselo oluphezulu kubahambi abaphezulu kuhlahlo-lwabiwo mali ukuxhasa ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
Uhambo lwangaphambi kobhubhane, uhambo lokuzonwabisa oluphuma eFrance lubala i-72.1% yohambo lwamazwe ngamazwe ngo-2019. iindawo zokutshixa.
Ngapha koko, iingcali zeshishini ziqikelela ukuba iihambo zokuphuma eziphuma eFrance ziya kubona izinga lokukhula elihlanganayo (CAGR) le-18.9% phakathi ko-2021 kunye no-2025, ukufikelela kwizigidi ezingama-34 zohambo lwamanye amazwe ngo-2025. Ukugxila kwiindlela zokuzonwabisa kuya kubeka umntu ophetheyo kwindawo eyomeleleyo. Ukwaziswa kweMuscat, iZanzibar, neColombo, kunye neenqwelomoya ezininzi Miami kunye nePapeete (Tahiti), zonke iindawo ezijolise kwezolonwabo, ziqinisekisa ukubheja komphathi kuhambo lokuzonwabisa olunamandla.
Air France ubhengeze ulwandiso ebusika lweenqwelo moya zehlobo kuphela ezivela eParis Charles de Gaulle ukuya eSeville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba naseKrakow.
Ngokwandisa ezi ndlela kwiindawo ezifudumeleyo ebusika (ngaphandle kweKrakow), iAir France iyaqinisekisa kwakhona ulindelo lwayo lokuba iindawo eziqhelekileyo, ezijolise ekuzonwabiseni ziya kubakho. I-poll ephilayo ibonise ukuba i-41% yabaphenduli behlabathi baya kukhetha ukuhamba kwamanye amazwe kwiindawo ezifanayo ababeqhele ukutyelela i-COVID yangaphambili xa izithintelo zilula. Ngenxa yokuba ezi ndlela zazifumaneka ngaphambi kwe-COVID, banokuxhamla kumnqweno owandileyo phakathi kwabahambi wokundwendwela iindawo eziqhelekileyo. Esi sisenzo esifanelekileyo esenziwa yiAir France njengoko izuza kwingeniso eyongezelelweyo ngokwanelisa imeko yentengiso ekhoyo.
Ngokokuvota okuphilayo, i-28% yabaphenduli behlabathi baveze ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lwabo lonyuke 'kancinci' okanye 'okuninzi' okoko kwaqala ubhubhane. Aba bathengi kufuneka babe ngabona bajolise kubo kwinqanaba loshishino lokurhuqa ixesha elide eAir France.
Ukugxila komphathi kwiindawo ezithile zokuzonwabisa zokuhamba ixesha elide kobu busika kuya kunika ithuba elaneleyo lokuthengisa amava kudidi lweshishini kubahambi bokuzonwabisa, ngakumbi abo banohlahlo-lwabiwo mali oluphezulu. Abakhenkethi bangaphambi kwe-COVID yayingumqolo wengeniso yepremiyamu, kodwa xa kukho imfuno ezantsi, abahambi lokuzonwabisa kufuneka babe yeyona njongo iphambili. Udidi lweshishini kufuneka lukhuthazwe yi-Air France njengesiqalo sokunethezeka kunye / okanye ukuphela kweholide. Ngokuthengisa iiflaya zokuzonwabisa, umntu ophetheyo unokunciphisa ngokuchasene nelahleko yeshishini, ekhusela ngokuchasene nelahleko yengeniso.